Ukucabanga okucacile kanye nezibalo ezingenakwenzeka - Paradoxa imidwebo
Kukhona okuhambayo lapho?
Ukucabanga okwengeziwe okubonakalayo
Amakhasi ombala ayingqayizivele enkulu yabantwana beminyaka yonke. Kuwebhusayithi yethu uzothola izisusa eziningi ezihlokweni ezahlukene: Imidwebo yezinkolelo ezibonakalayo kanye nezibalo ezingenakwenzeka, okuthiwa yi-paradox, zijabulise zonke izingane.
Ukucabanga okucacile kanye nezibalo ezingenakwenzeka
Ukucabanga okucacile - ukucabanga
Ukucabanga okucacile kubhekisela kuzo zonke izici zobuntu bamanga obubona njengegama elihlangene.
Lokhu kungenzeka, ngakolunye uhlangothi, lapho sibona izinto ngokuhlukile kulokho okuyiyo ngempela ngendlela ethile yokumela.
Noma abantu abahlukile kwisifanekiso esifanayo baqaphela ezinye izinto noma nje izinto zidonsa ngendlela abangenakuze zenzeke endaweni ejwayelekile futhi ubuchopho bethu budidekile.
Zithokozise ngamalengiso ethu optical. Chofoza kusixhumanisi ukuya ekhasini nge template ehambelanayo:
Nguyiphi umugqa omude?
Yimuphi umfanekiso ode kunabanye?
Yimuphi umbuthano omkhulu
I-parallel noma igwegwe?
Okufanayo noma okungalungile
I-parallel noma cha?
Ukuchofoza kusixhumanisi sokuguqula ekhasini kanye nesifanekiso esilandelayo:
Ubuso noma i-vase
Imigoqo emithathu noma emine?
Ukukhohlisa okubonakalayo - ubonani?
Ezithombeni ezingezansi, kubonakala sengathi kukhona okuhambayo, bheka eduze! Chofoza ezithombeni ukuze wandise izithombe:
Le mibuthano iyahamba .... hhayi
Uma umuntu ebheka lesi sithombe ngendlela egxilile, umbono womuntu uzuza umbono wokuhamba ngendlela eyisiyingi. Yiqiniso, akukho okuhambayo kulesi sithombe!
Nakulokhu, ubuchopho bethu buqamba usulu ekusebenzisaneni ngamehlo ethu: i-illusion illusion iqukethe ukucubungula okubonakalayo kwephethini.
I-Kanisza Square - Ukubona into engekho
Ngisho noma sikholelwa ukuthi kucacile ngamehlo ethu: ayikho isikwele phakathi, izakhiwo zethu zobuchopho isithombe esibheke emaphethini ajwayelekile. Lesi simo siyaziwa ngokuthi "i-Kanisza Square".
Konke lokho akulungile neze?
Ngempela? Yikholelwa noma cha, imigqa yesiphambano ihambisana ngokuphelele. Ungakwazi ukukala lokhu noma, ngokugxila emigqeni emibili ehlukene, ungabona ukuthi yonke imigqa ihambisana.
Ukukholelwa okubonakalayo kubantu abadala
Izingane zibona okuthile okuhlukile lapha kunabantu abaningi abadala ...
Isibalo esingenakwenzeka - unxantathu
Isibalo esingenakwenzeka - umbuthano
Izibalo ezingenakwenzeka - izitebhisi